China Four-Way Multi Shuttle orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
1 Miditra tokana mandeha ho azy Manaiky toromarika avy amin'ny solosaina mpampiantrano, dia mampita ho azy ny boaty amin'ny faritra buffer miditra mankany amin'ny toerana voafaritra.
6 Fitantanana asa Ekeo ny torolàlana momba ny asa hamahana ny lalan'ny asa.
7 Fampiasa lavitra Izy io dia afaka manavao sy misintona programa avy lavitra (Ao amin'ny tambajotra Wi-Fi).
8 Fanaraha-maso ny rafitra Manara-maso ny angon'ny rafitra amin'ny fotoana tena izy sy fanairana natsangana tamin'ny feo sy hazavana amin'ny toe-javatra tsy ara-dalàna.
9 Fijerena fitempon'ny fo Mifandraisa amin'ny fampiantranoana rafitra fanaraha-maso ny solosaina amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fitepon'ny fo, ny fanaraha-maso ny sata an-tserasera
10 Fijanonana vonjy maika Famantarana vonjy taitra alefa lavitra rehefa vonjy maika, ary mijanona avy hatrany ny fiara fitaterana mandra-pialana vonjy maika.
Karazana fonosana entana: daba, baoritra, kitapo sns.
Ny haben'ny entana (mm): sakany 200-600mm, Halany 200-800mm, Haavo 100-400mm
Lanja tsara: <=35kg
Haavo fiasana: <=15m
Ny fahaiza-manao 3-4 heny noho ny AS/RS.
Tena mety amin'ny daba kely, baoritra, fitahirizana tote, fanangonana, asa famenoana.
Azo atao ny manampy shuttle bebe kokoa amin'ny sehatra rehetra ary manatsara ny fizotran'ny rafitra araka ny filan'ny orinasa.
 Vahaolana mahomby ho an'ny fitahirizana vonjimaika sy ny asa fanohanana eo amin'ny sisin'ny tsipika famokarana.
Fahombiazana miditra sy mivoaka: Habetsan'ny daba/baoritra isan'ora_____.
Hosedraina alohan'ny fanaterana.Ny injeniera dia hitsapa ny rafitra manontolo amin'ny tranokala na amin'ny Internet.
teo aloha: Shuttle an-trano
Manaraka: Radio Shuttle misy lalana efatra
Baby Shuttle, Carton Live, Conveyor, Shuttle amin'ny lalana efatra, Asrs Storage, Drive amin'ny Racking,